CLS DC-10-30F ukubuyekeza
Umbuzo CLS DC-10-30F ukubuyekeza
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #195 by Gh0stRider203
Mina ongeke awaqambe amanga, Ngingumfana fan of the 3 injini izinyoni. Njalo la ibi khona. Uzoba KUYAQABUKELA ningibone e lutho esingaphansi 2 izinjini.
Lena inyoni enhle ngempela. iza eziningi liveries, imininingwane ngempela nice, izibambo omkhulu kodwa kukhona kancane yenkinga ke ...
Uyabona, max ebanga kule inyoni lubalwa 6,600 mi; Max Okokhelekayo lubalwa 36,650 US gal; futhi max Take-off isisindo lubalwa 572,000 lbs.
Nokho, uma ubheka FSX... ikhombisa isisindo esikhulu seMax njenge-558,000lbs ne-max evunyelwe njengama-32,368 amalitha, umehluko wamalitha angama-4,282.
Njengamanje ngenzani a 6305.0 indiza NM, futhi Ngingumfana phansi 7% ngakwesokunxele. Bengilokhu sihamba ngesikhathi Mach .82 (okuyinto ejwayelekile cruise isivinini) e 35,000 izinyawo, wayinquma ngezinqola zempi egcwele. Akubuzwa ... I gonna uyenze asele 4.5 amahora w / o kokuba ifake uphethiloli ....
Ngiye imilayezo CLS ukubona uma siphelela uyakuqaphela lokhu, futhi am Njengamanje belindele ukuzwa emuva.
Awukalenzi indlela ILS okwamanje (ayisetshenziswa kule sasilokhu lol kungcono um lol ezahlukene), kodwa mina ungalindeli ukuthi kube nzima kakhulu ukuyenza.
Kuze kube manje Nokho .... Bengizokunika le nyoni ibe A- enhle (yeah washintsha umqondo wami lol). Nganele ukufaka omunye lapha Thomas uRuthe, ngizomisa ukubuyekeza ngalolo lol omunye Kungenzeka kube usuku noma ukuze kwakuqabukela ukwenza esingaphansi indiza max ebanga uma kuziwa wezimpahla
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-11 ezedlule Gh0stRider203.
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #199 by Gh0stRider203
ILS oluphakeme esingagwegwesi le nyoni, sabonga. Kuyavunywa ngasebenzisa izinqamuleli zekhibhodi, kodwa namanje lol kodwa lutho impendulo evela CLS ....
Isikhathi ukudala page: 0.327 imizuzwana